Topic: ကားတစ်စီး၏ရွေးချယ်မှု, မော်တော်ဆိုင်ကယ်
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ စီးရီးအသစ်မှ Mercedes Vito သို့မဟုတ် Volkswagen Transporter ကို ၀ ယ်ယူခြင်းကဘာပိုကောင်းလဲ။ ဒါမှမဟုတ် Opel Vivaro လား။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ စီးရီးအသစ်မှ Mercedes Vito သို့မဟုတ် Volkswagen Transporter ကို ၀ ယ်ယူခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ ဒါမှမဟုတ် Opel Vivaro လား။ လက်များနှင့်ခြေထောက်များ T2003 နှင့် T4 ပို့ဆောင်ရေးနောက်ကွယ်မှ။ အကယ်၍ ...
Sedan နှင့် Hatchback ဆိုတာဘာလဲ။ ခြားနားချက်များကဘာလဲ။ သင်သိရန်မလိုအပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင်ကား sedan ကိုဂန္ထဝင်ကားတစ်စီးကိုမေးသောအခါကားရှိရန်အချိန်မရောက်သေးပါ။ Hatchback တွင်ပင်စည်တစ်ခုရှိသေးသည်။
ပိုလို sedan ဘယ်မှာတပ်ဆင်ထားလဲငါ့ကိုပြောပြပါ ဦး ။ sledgehammers နှင့်အတူအရက်မူးဝက်ဝံ balalaikas နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမနည်းယစ်မူးပြည့်တန်ဆာများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူရုရှားတွင်ကားများစုဆောင်းသည်ဟုသင်ထင်သလား Kaluga မှာ ...
ဒါကဘာလဲ chlamyda manada? ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစဉ်၌ရှိ၏))) ကလျမီဒီနာ၏ဖွဲ့စည်းပုံ: 1 ။2။ Vacuoles3။ ဆဲလ်နံရံ4။ တွင်းနက်5။ Core6။ Pyrenoid အဓိကအားဖြင့်အပင်များဖြင့်မျိုးပွားနိုင်သည်။
တစ်နှစ်လျှင်မြင်း ၃၀၀ အတွက်အခွန်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ၃၀,၀၀၀ လောက်ဒီမှာငါ့ landik မှာ ၂၀၀၈၈၈ လီတာရှိတယ်။ အခွန်ကိုပေးရတဲ့မြက်ပင်, oats နှင့်ပူဖောင်းမှ 300 Plus အားပေးဆောင်အတူ ...
Irbis ttr 125 pit ဆိုင်ကယ်အတွက်သင်အခွင့်အရေးလိုအပ်ပါသလား။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသူတို့သည်အမျိုးအစား A ကိုရေးသားရန်မလိုအပ်ပါ။ လူများစွာကသူတို့လိုအပ်တာကိုရေးကြတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုယုံကြည်ရမလဲ။ ငါ fuck ဆိုတဲ့မပေးပါဘူး။ ငါလိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းသူကပြောတယ်မပေး, 😀လျှင် ...
အလုပ်ကောင်းတစ်ခုဘယ်လိုရှာရမလဲ။ အလုပ်ကောင်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။ အလုပ်ရှာဖွေသည့်အခါအလုပ်ရှာဖွေနေသူ၏အဓိကအမှားများကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲနိုင်သည်။ * အလုပ်ရှာဖွေသည့်နည်းဗျူဟာတွင်အမှားများ၊
ဘယ် Dodge Challenger, Ford Mustang သို့မဟုတ် Chevrolet Camaro ss ပိုကောင်းလဲ။ camaro စိန်ခေါ်သူနှင့် mustang, သူတို့ကပိုပါဝါရှိသည်, ထို camaro အကြောင်းအကြောင်းကိုများအတွက် Ford Mustang သူဌေး 302 ဆွဲများအတွက်ဆွဲကဲ့သို့လမ်းလျှောက် ...
Mercedes ရဲ့နာမည်က "Gelik" Jeep ဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။
Mercedes ရဲ့နာမည်က "Gelik" Jeep ဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ Steyr Daimler Puch Gelandewagen နှင့်သူသည် Mercedes နှင့်အပေါ်ယံဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကားသည်သြစတြီးယားနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လျောက်ပတ်သောပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်း ...
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများအတွက် Volkswagen ဂေါက်သီးသည်သူတို့၏ဘဝတွင်ပထမဆုံးနိုင်ငံခြားကားဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ဂေါက်သီးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်သည့်“ ဒုတိယ” ဂေါက်သီးအားပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်အလွန်တန်၏။ ထိုအချိန်ကတည်းကအချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
Nissan QASHQAI သို့မဟုတ် Mitsubishi ASX ??? ဘာကပိုကောင်းလဲ၊ ? ; ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! .. ဒီကားတွေအတန်းအစားတန်းတူဖြစ်တယ်။ ကျနော့်အမြင် QASHQAI ကပိုမိုအဆင်ပြေပြီးမူရင်းဖြစ်သည်။ asx ကဲ့သို့ Lancer Yul မင်္ဂလာပါ! ...
"ဖြတ်" သည် Auto ခေါင်းစဉ်တွင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
"ဖြတ်" သည် Auto ခေါင်းစဉ်တွင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကားမောင်းခြင်းသည်သေဆုံးသူကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကားခများဖြင့်အနီးစပ်ဆုံးကားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုမှာဒေါ်လာ ၆၀၀ ဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှု၏နိယာမမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - သင်၌ကားဟောင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုရုရှားမှာအခုထုတ်လုပ်နေပြီလား။ Stealth ကိုမော်စကိုရှိစက်ဘီးစက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ Kaliningrad တွင် Baltmotors သည်တရုတ်လူမျိုးများကိုစုဝေးစေပြီးတိုင်းပြည်၏နေရာတိုင်းတွင်အလားတူအခြေအနေမျိုးရှိသည်။ ဘီလာရုစ်တွင် Minsk သည်မော်ဒယ်သစ်များထုတ်လုပ်သည်။
တရုတ်ကားပိုင်ရှင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ကြားချင်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်၏အိမ်နီးချင်း Ku-Ku ၏သဘောထားဖြစ်သည်။3ကီလိုမီတာပြီးနောက်။ မီးစက်ကိုဖုံးအုပ်ထားကာအာမခံအောက်တွင်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်သူကငွေနှင့်အာရုံကြောများများစွာကုန်ကျခဲ့သည်။ အရာအားလုံး ...
Bogdan နှင့် VAZ 2110 နည်းပညာအရကွာခြားချက်ကအရည်အသွေး၊ အရည်အသွေး၊ Lada Priora (Struts, springs နှင့်အချို့သောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအပေါ်ရှေ့ဘက် struts များ၏ထောက်ခံမှုများ) မှ Bogdan ကားများပေါ်ရှိဆိုင်းငံ့မှု။ ။ Front bamper နှင့် radiator grill ...
အလိုအလျောက်ဂီယာနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ်ရှိပါသလား ထိုကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်အမည်မျှတန်ဖိုးရှိသနည်း။ ငါသည်ကြားသော်လည်းမမြင်၊ Twist Go ဆိုင်ကယ်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်း mozies တွေမမြင်ခဲ့ဘူး။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကတရုတ်ရောင်းတာကိုတွေ့တယ်။
lamborghini or lamborghini - မှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုအသံထွက်ရမလဲ။ LAMBORGINI! အီတလီမှာ "gh" ဆိုတဲ့စာလုံးက "g" လိုအသံထွက်တယ်။ ထို့ကြောင့် - "Lamborghini" ။ spaghetti လိုပဲ - spaghetti နဲ့ spaghetti မဟုတ်ပါ။ ဘာသာစကားများကိုလေ့လာပါ။ ) LAMBORGINI !!!! ကုမ္ပဏီ…
ဘယ်သူကကြွက်သားကားဆိုတာသိတယ် ??? ထိုကဲ့သို့သောအင်အားကြီးမားသောကားများ၊ gt; 200 hp, ဥပမာ Shelby, Ford mustang, Chevrolet camaro Muscle Car (အင်္ဂလိပ်ကြွက်သားကား), သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိသောကြွက်သားကားအမျိုးအစား ...
Hummer2ရဲ့လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကဘာလဲ။ လေးလံသောကားတစ်စီးပေါ်တွင်၎င်းသည်အရှိန်နှင့်အရှိန်နှုန်းတို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မင်းဘယ်လိုစီးမှာလဲ သို့သော်ကီလိုမီတာ ၂၀ ရှိသောကီလိုမီတာ ၁၀၀ လျှင်လီတာ ၃၀ ၂၅ ခန့်ရှိသင့်သည်။
52 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,675 စက္ကန့်ကျော် Generate ။